UALEX PINA UMDALI WEMALI HEIST UTYHILA IXESHA LOKUBUYA LESI-5 KUNGEKUDALA UZA KUBUYELA KWIISETI - IINKQUBO ZETV
Ixesha le-Heist lemali liphakamise isenzo kwaye longeza ukubulawa kwabantu ngaphezulu kwawo onke amaxesha adlulileyo. Abafaki babelindele ixesha
Ixesha le-Heist lemali liphakamise isenzo kwaye longeza ukubulawa kwabantu ngaphezulu kwawo onke amaxesha adlulileyo.
Abafaki babelindele ukuba ixesha le-4 liphele ngendlela efanayo nexesha lesibini, ngokuqukumbela i-heist emva kwamaxesha amabini.
Njengoko kungekho nto ihamba ngokwesicwangciso, iqela lanyanzelwa ukuba lizithengele ixesha elithe kratya.
Ekugqibeleni, ixesha lesine laphela kwi-cliffhanger, eyanika iMoney Heist ixesha lesihlanu.
Kwakhona, iNetflix iqinisekisile ixesha elitsha. INetflix ibhengeze iMali Heist izakubuya isizini yesihlanu kunye neyokugqibela nge-31 kaJulayi 2020. Nangona kunjalo, umhla wokukhutshwa ulibazisekile.
Ixesha elizayo lobukumkani bokugqibela
Isizini yesihlanu yeMali Heist iya kwenzeka eSpain, eDenmark nasePortugal. Ixesha lokugqibela lineziqendu ezili-10. INetflix yaqala ukusebenza kwizicwangciso ezintlanu zonyaka kwiintsuku ezimbalwa emva kokubhengezwa, ukuqala kwemveliso ngo-Agasti 3.
Isizini 5 yeHist Heist: Iya kukhutshwa nini kwiNetflix?
Ixesha lesihlanu lithathe ixesha elininzi lifumana uphawu oluhlaza, kodwa yenye yezona ndawo zidumileyo zeNetflix emhlabeni, bekungaqinisekanga ukuba iNetflix iyakutsala iplagi kwingxelo engagqitywanga.
Abathandi balinde iinyanga ezilithoba phakathi kwamaxesha amathathu anesine eMali Heist. Ukuba ixesha lesihlanu belilandele iphethini efanayo, ngesele ubuyile ebhankini ukuphela kuka-2020.
Imveliso emiswe yiNetflix Kuzo zonke iichungechunge zalo zokuqala iiveki ezimbini ngenxa yesifo esiqhubekayo se-COVID-19. Kodwa i-cast kunye neqela labasebenzi libuyele emsebenzini, ngokweengxelo.
Ngelixa ababukeli bengenakulindela ukuba ixesha le-5 likhuphe kulo nyaka, i-2021 ibonakala ngathi inokwenzeka, ngaphandle kwazo naziphi na iingxaki.
Isizini 5 yeHist Heist: Ngoobani Bonke abaya kubakho?
INetflix ibhengeze ukuba ngaphandle kwe umlingisi wakudala , abanye ubuso obutsha buza kubonakala.
UMiguel Ángel Silvestre noPatrick Criado baqinisekile ukuza njengezongezo ezintsha kumdlalo.
ngobuqili: Isahluko 5
Abadlali bangaphambili baqinisekisile ukuphinda badlale indima yabo. Ibandakanya: -
U-ularsula Coberó (Tokyo), Álvaro Morte (uNjingalwazi), Itziar Ituño (Lisbon), Pedro Alonso (Berlin), Miguel Herrán (Rio), Jaime Lorente (Denver), Esther Acebo (Stockholm), kunye Enrique Arce (Arturo).
Ikwangulo noDarko Peric (Helsinki), Hovik Keuchkerian (Bogotá), Luka Peros (Marseille), Belén Cuesta (Manila), Fernando Cayo (Coronel Tamayo) Rodrigo de la Serna (Palermo), Najwa Nimri (Inspector Sierra), noJosé Manuel IPoga (Gandía).
Ixesha le-Heist yeMali 5: Yintoni enokulindelwa?
Zininzi iintambo ezikhululekileyo zokuthunga ekupheleni kwexesha lesine. Ke, ngoku iziqendu ezizayo zinendawo enkulu yokwakha ibali elingcono.
ILisbon yenziwe yabuyela umva ukuya ebhankini, kodwa ngonjingalwazi ofunyenwe nguMhloli u-Alicia Sierra, abanye abanandlela yakubaleka.
Kuya kufuneka bagcine ukunyibilika kwegolide ngesantya esiphezulu kwaye banethemba lokuba uSergio ngandlela thile uyakwazi ukugqithisa iSierra kanye.
Ixesha le-Heist lemali 5: Iithiyori zabalandeli ezenzelwe umboniso.
Njengamaxesha onke, ekupheleni kwekhredithi yexesha le-4, umhobe wokuchasana 'uBella Ciao' wanika i-goosebumps kubo bonke abalandeli abalapho.
Ingoma igcwele imixholo engqineke ibalulekile kulo lonke uthotho. Kodwa eyona nto ibaluleke nangakumbi ngeli xesha kukuba ngubani oyiculayo.
Kwachazwa ukuba umdlali weqonga uNajwa Nimri nguye ocula umhobe, kwimizuzwana nje embalwa emva kokuba iikhredithi ziqale ukubonakala.
Ngaphambi koku, ngabalinganiswa kuphela abalwa kunye noBerlin noSergio ababecula le ngoma.
Yenzelwe ukumela i-backstory kwinjongo yabo.
Oku kusishiya nombuzo omkhulu.
Ngaba oku kuthetha ukuba u-Alicia uza kujika abe lihlakani kwiqela lesizini lesihlanu?
Ngelixa oku kunokuba yinto engangqinelaniyo, inyani yokuba uNimri nguye ohambisa umgca wokugqibela wencoko yababini ngaphambi kokuba ikhonkco lekhredithi libonakale ngathi linenjongo ngakumbi kunaleyo.
Nangona ezinye iithiyori zabalandeli zicebisa ukuba uAlicia angazifihla abe nguTatiana, umfazi waseBerlin kwimitshato yakhe yomtshato, ekhangeleka ngathi liqhinga elikhulu. I-Ofcourse, aba bafazi babini babonakala befana, kodwa uDiana Gómez wadlala uTatiana, hayi uNimri.
Okwangoku, abalandeli abanakuyinqanda into yokuba kukho ubudlelwane phakathi kwaba babini. Ngaphezulu kwayo yonke le nto, iMali Heist ayikaze ithandabuze kusapho olothusayo lutyhila kwixa elidlulileyo.
Oku kuthetha ukuba uAlicia noTatiana banokunxulumana ngokusondeleyo emva kwayo yonke loo nto.
Nokuba yeyiphi na indlela, abalandeli abayi kumangaliswa ukuba uAlicia ujoyine unjingalwazi kwisizini yesihlanu, etshintsha amandla othotho ngokupheleleyo.
kuphume nini zero
Umdlalo woboniso bhanyabhanya ozayo
zingaphi iziqendu zokufuna ingqondo
Igumbi labantu abakhethekileyo
Indoda enye yenqindi yomhla wokukhutshwa kwexesha elitsha
faka i-spider verse cast